Uluhlu lwabantu abahlukileyo abanezigebengu ezivela ku-AZ
Iiprofayili zeZiqhwala eziMnyama
Uluhlu lweAlfabhethi lwaBalaphuli abaLawuliweyo
Iphoyisa lika-Abu-Jamal u-Abu-Jamal wabulawa. Icala lakhe laba yinqanaba lamaqela afana nentshukumo yokulwa nehlabathi, izigqeba zokuchasana nokufa, kunye nokunyuka kwamaNtsundu amaNtsundu abavakalisa ukungenacala.
UMehmet Ali Agca wadubula uPapa uJohn Paul II ngoMeyi 13, 1981, eSint Peter's Square. Ngaphambi kokuba uPapa uJohn Paul afe abo babini badibana ubuso nobuso iminyaka engama-30.
Siller Killer, Rapist
Akukho mntu unokukholelwa ukuba ubuso obunjengomntwana kaYohn Eric Armstrong, obizwa ngokuba ngu "Opie" ngabahlobo bakhe beenqanawa, ngokuqinisekileyo wayejongene nombulali obulalayo kunye nokubala.
Umbulali wabantwana, uPedophile
U-Avila watholwa enetyala lokuthumba, ukuxhatshazwa ngokwesini kunye nokuxhatshaza uSamantha Runnion oneminyaka emihlanu ubudala.
Wayengumthetheli we-$ 1.65 yezigidigidi zeedrama zokusebenza kwezidakamizwa ezithengisa i-heroin evela eMiddle East kunye ne-cocaine evela eMzantsi Melika kunye nokuhambisa izidakamizwa kwi-US e-western-west pizzeria.
UBagwell wabulala unina nabanye abane, kuquka umntwana oneminyaka emine ubudala, kuba unina wenqaba ukumnika imali.
Joe Ball kunye ne-Alligator Pond
Umntu obulala kakhulu
Ibhola likhankanywa ngokubulala abaninzi abafazi abangama-20 kunye nokuyondla kwizilwanyana zakhe.
Imfazwe yezobugebengu zamaNazi, eyayijongene nokuhlushwa nokufa kwamawaka amaYuda, yakwazi ukugwema ukubulawa ngenxa yezophulo-mthetho zezobukhosi ngokubalekela iYurophu eBolivia ngoncedo lwabasebenzi be-intelligence base-US.
I-Child Predator, i-Torturer, i-Cannibal
UNathanel Bar-Jonah, a / k / uDavid Paul Brown, ungumntwana olahlwa yintolongo ovalelwe entolongweni emva kokuhlambalaza ngokuphindaphindiweyo, ukuhlambalaza nokuzama ukubulala abantwana. Kwakhona wayekrokrelwa ngokubulala umntwana ngokulahlwa komzimba ngeendlela ezingabonakaliyo ezibandakanya abamelwane bakhe abangaboniyo.
Umbulali weSerial, Predator Sexualist, Rapist
Iprofayili yecala lombulali uCesar Barone, ngoku eline-death row e-Oregon, ngokudlwengula nokubulala amabhinqa asebekhulile. UBarone, eneminyaka eyi-19 ubudala, wayekrokrelwa ngokudlwengula nokubulala ngokubethekisa ummelwane wakhe oneminyaka engama-71 ubudala ehleli embhedeni.
Ngommelwane, wayeyicatshulwa kodwa wayethandwa kwaye wabandakanyeka ekuququzeleleni iinkqubo zokubukela zoluntu zoluntu, kodwa wayengomnye wabambulali ababulalayo kwiimbali zase-US, abaye bathatha inxaxheba kwizenzo ezimbi zokuhlushwa ngokwesondo nokubulala.
UDavid Berkowitz, owaziwa ngokuba nguNyana kaSam, ngumntu onobugqibeleleyo wee-1970 waseNew York City, owabulala abantu abathandathu, wabulala abanye abatsha bathi inja yommelwane wakhe yidemon eyamxelela ukuba akwenze.
UMiccosukee Indian Indian Kirk Douglas Billie, 36, wagwetywa ejele entolongweni ngenxa yokufa komntwana, uKurt, 5 noKeith, 3. Icala lakhe laba yingxabano enkulu ngokumelela ubuzwe kunye neFlorida.
Siller Killer, Pedophile, Rapist
U-Arthur Gary Bishop waphuma ekubeni ngumfundi ozukileyo, u-Eagle Scout kunye nomthunywa wezithunywa zevangeli eziseneminyaka elishumi elivisayo ukuya kumntu onqabileyo onokuzenzekelayo kunye nomntwana obulala umntwana ekugqibeleni wayebhekiselele kwiimifanekiso engamanyala afunyaniswa naye xa ekhula.
Umbulali obulalayo, uMxhatshazi, umThuthuli
U-Ian Brady kunye nentombi yakhe u-Myra Hindley babengumbulali wabaseBrithani, abajongene nobulali lwabantwana ababaziwa ngokuba ngabaMbulali bamarha.
Ummeli Wezopolitiko - 1859
Unyanzelekile ngokunyaniseka waza waxhonywa emva kokuzama ukuthabatha iArsenal eVirginia ukwenzela ukuba iingcambu zengalo zithinteke.
U-Al-Amin aka H. Rap ​​Brown ngo-Matshi 2000, wagxothwa ngamapolisa amabini ezama ukumnika incwadi yokubamba inkohlakalo encinane. Omnye wamagosa wafa emva kokuba u-Al-Amin atyhule ezinye iibhola ezintathu ezikhuselekileyo elalikhuselekile esitratweni.
UKenneth Eugene Bruce
Ikhaya lokuhlasela, uMbulali
UBruce wabulala ngenkohlakalo umfazi oneminyaka engama-55 ubudala waza wazama ukubulala indoda yakhe ngexesha lokuhlasela kwekhaya.
UMartin Bryant waqhubeka nokubulawa kwindwendwe kwiindawo ezithandwayo zokuvakatyela ePort Arthur, eTasmania.
Ngethuba lePort Arthur Massacre, uBryant wabulala abantu abangama-35 balimaza abanye abangu-37.
UJames J. Bulger
I-FBI Ininzi ifunwa
Umfaki-sicelo ufunwa yi-FBI yokubulala (ubunzima be-18), icebo lokwenza uxhapha, ukusabalalisa izidakamizwa kunye nezinye iindleko.
Siller Killer, Rapist, Necrophiliac
Wayenomdla, uhlakaniphile, kwaye waba nekamva kwezopolitiko. Kwakhona wayengomnye wababulali ababulalayo kwiimbali zaseMelika. UBundy wamemeza engenacala waze wafa kwisihlalo sombane sasisondele. Emva koko waxelela ngokukhawuleza ukuba abonise ubungendawo boqobo ngaphakathi kuye.
UWilliam L. Calley
ULt William L. Calley ubenetyala lokubulawa kwabantu abangama-22 baseVietnam ngexesha lokubulawa kukaMatshi ngo-16 kuMatshi 1968, isiganeko esibizwa ngokuba yi-My Lai Massacre. ULt. Calley nguye kuphela umntu ofunyanwe netyala kweso siganeko.
Inkwenkwezi yezemidlalo uRae Carruth yafunyanwa enetyala lokwenza isigwebo sokubulala, ukudubula kwisithuthi esipheleleyo kunye nokusebenzisa isixhobo sokutshabalalisa umntwana ongakazalwa kwaye ugwetywa iminyaka eyi-18-24 entolongweni.
UFrank Ray Chandler
U-Chandler wamxabela ngokugqithiseleyo umfazi oneminyaka engama-90 waza wamshiya ukuba aphile echibini lakhe igazi.
UNorman Richard Cleary
UNorman Cleary kunye neqabane lakhe bahlakulela amakhaya befuna umntu ukuba aphule kwaye xa kufike ekubulaleni umninindlu osebenza ngaphakathi, loo mbini ayizange ibenze iliso.
UCorey Miller ungumculi odumile we-Rap owaziwa ngabalandeli bakhe njengoC-Murder. Wayegwetywa ngokubetha nokubulala ngokubulawa komdlali oneminyaka engama-16 ubudala owayephethe i-posters kwindonga yakhe yokulala.
Udokotela wamazinyo ogwetyelwe ukubulala.
UCorbin ungumhlengikazi wamazinyo waseGeorge oye wathweswa ngamatyala amakhulu amabini eGeorgia ngokuphathelele ekufeni komfazi wakhe nokufa kwintombi yakhe yangaphambili kwaye uphando malunga nokubulawa kwesithathu.
UJohn Corona wayengumkhonkontrakta wezabasebenzi oye wahamba ngesonto elithandathu lokubulala, ukudlwengula nokubulala amadoda angama-25 awayeqeshwe.
Uyaziwa ngokuba ngowona unamalungu amaninzi kwezopolitiko anxulumene nolwaphulo-mthetho kwaye uthethwa kubagwebi ngokuthi "Amantombazana."
Umbulali, 9/11 Uqhankqalazo
UDarks wayemthiyile umfazi wakhe owayengumfazi, kangangokuthi ngelinye ilanga njengoko wayishiya icawa wabubulala waza wambulala. Kodwa ubugebengu bakhe abuzange bume apho.
UGenero Espinosa Dorantes ufunwa yi-FBI ngokungabi mthethweni ukuza kuphepha ukutshutshiswa nokubulala.
Millionaire Schizophrenic Murdererer
UJohn E. DuPont wayengumdlalo we-wannabe ozuze izigidi zeentengo kwaye wathenga isikhundla sakhe kwilizwe lezemidlalo ukuba akakwazi ukuzuza. Wayekhohlisile kwaye wayethanda ukudlala ngezibhamu, inhlanganisela ekugqibeleni yaholela ekubulaleni.
Umbulali obulalayo, uMnxeba, uMxhasi
UMarc Dutroux, umbane ongasebenziyo, kunye noyise wesithathu, wenza uchungechunge lokuthunjwa, ukudlwengulwa nokubulala inani elingaziwa lamantombazana aselula. I-Dutroux kunye neenkambiso, kuquka nomfazi wakhe, zixutyushwa phakathi kwezigwenxa ezimbi kwiimbali zaseBelgium.
NgoDisemba 7, 1993, uColin Ferguson wagibela isitima se-Long Island kwaye waqala ukudubula abagibeli ngebhola le-Ruger P-89 9mm.
Isiganeko esibizwa ngokuba yi-Long Island Railroad Massacre sabangela ukuba abantu abathathu babulawe kunye ne-19 balimala.
URobert William Fisher
URobert William Fisher ufunwa ngokubulala umfazi kunye nabantwana abancinci abancinci aze aqhube indlu.
U-Fuentes, kunye nokugweba ezimbini ngaphambi kokuba abulale abantu, wayekhululekile ezitalatweni ukuze afumane ixhoba lakhe elilandelayo, wabulala kwimeko yokusela ubhiya.
UJohn Wayne Gacy "uMbulali weClown"
UJohn Wayne Gacy ubenetyala lokuhlushwa, ukudlwengulwa nokubulala amadoda angama-33 phakathi kowe-1972 de ukuboshwa kwakhe ngo-1978. Wayebizwa ngokuba ngu "Killer Clown" ngenxa yokuba wafumana abantwana kwimibutho njenge "Pogo The Clown."
Siller Killer, Grave Robber, Necrophiliac, Cannibal
I-Plainfield, isebe lamapolisa laseWisconsin lalingenalwazi ngehlabathi eliqhenkcezayo ababekungena ngalo xa beya ekhayeni lasefama likaEdm Gein ukuba baphande ukunyamalala komfazi wendawo. Ulwaphulo-mthetho lukaGein lwahla kwimbali njengolunye ulwaphulo olubandakanya ukubulala, ukuphanga kunye nokuxhatshazwa.
UVito "Don Vito" uGenovese
Omnye uMafia "umphathi wabasebenzi" wayeyinhloko yentsapho yolwaphulo-mthetho yaseGenvese eyafumana udumo lokuba ngumthengisi weziyobisi.
UVictor Manuel Gerena
U-Victor Manuel Gerena ufunwa malunga nokuphanga ngokuxhobileyo malunga nama-dollar ayi-7 ezivela kwiinkampani zokhuseleko e-Connecticut.
Unyana waseGenosvese, uVincent "Chin" uGigante, owaba ngumthunywa phakathi koyise kunye nezinye izibundu zeGenvese xa uyise eboshwe.
Umphathi weNtsapho yaseGenvese
Umshicileli ogama lakhe lingu-"Oddfather" ngenxa yomkhwa wakhe wokuhamba ngeengubo zakhe ezithetha naye, enethemba lokuncenga ukunyaniseka ukuba ngaba wabanjwa.
URichard Steve Goldberg
Ufuna ukuxhaphazwa ngokwesini ngabantwana, ukuveliswa kweefoto zoonografi, kunye nokuhamba ngokungekho mthethweni ukuphepha ukutshutshiswa.
U-Godwin wasinda ejele laseFolsom e-California, apho wayesebenza isigwebo eside ixesha lokubulala.
UDonald "Pee Wee" i-Gaskins
UGekinskins wayengumbulali obulalayo kwiSouth Carolina. Emva kokuba ubudlova bakhe bekhutshwe, wayengazi mida, ukuxhaphaza, ukubulala, ukunqanda amaxhoba, abesilisa nabesifazana.
Umntu owayengumfazi we-Gambino Family
UGotti, owaziwa nangokuthi "nguTeflon Don" kwaye kamva "uVelcro Don" wathola indlela yakhe emandleni emva kokucwangcisa ukufa kukaPaul Castellano.
Amagqabi amaGreen kunye namanye amadoda amathathu athatha inxaxheba kwinqaku lokuphanga kwindawo yaseHouston ngaphezu kweeyure eziliqela eziphela ekutshuntsheni iGreen indoda ephethe isibhamu se-Tech-9 esitshekitshe ngokuzenzekelayo ngemali eyayinayo esikhwameni sayo i-$ 50.00 nje.
Hacking wadubula umfazi wakhe okhulelwe ekhanda ngenkathi elele kwaye wayilahla umzimba wakhe kudoti, apho kwafunyanwa inyanga ezintlanu kamva.
U-Hopkins wabulala amantombazana amabini abancinci, ahlamba kwaye azinqanda ngokuphindaphindiweyo ngama-100 ngokuqinisekileyo ngenxa yokuba bebuhlungu.
Umbulali obulalayo wabulala kwaye wabulala ubuncinane amahenyu angamahlanu kwi-East End yaseLondon ngo-1888. Ngenxa yokuba akukho mntu wabanjwa okanye wazama ukubulala, ulwaphulo-mthetho luyakhathazwa kakhulu kwimeko engaphezu kweminyaka eyi-115 kamva.
Afunyananga netyala kwiintlawulo zeqhinga lokubamba abantwana, ukuvalelwa kwamangqina kunye nokuphanga, izibalo ezintathu zokwenza izenzo ezingcolileyo kumntwana, ukuzama ukwenza izenzo ezingcolileyo kunye nomntwana, kunye neenkalo ezine zokulawula iimbosa ezinxilisayo ukuncedisa ukuthunyelwa kwe-felony.
Umbulali - Ulwaphulo-mthetho
U-Killen, ilungu elithembekile likaKu Klux Klan, ngo-2005, lafunyanwa lijongene nokufa kwabantu abathathu abasebenzisa amalungelo oluntu ababhalisa abavoti abamnyama ngexesha le-"Freedom Summer" ka-1964.
Umbulali, uMntwana oLwabiwo
U-Lagrone wamisa intombi yakhe eyayiseneminyaka eli-10 ubudala waza wabulala intombazana encinci kunye nabantwana bakhe abakhulu abadala
Pedro Alonso Lopez - I-Monster ye-Andes
ULolez wayengomnye wabantu ababulalayo beembali, kodwa wakhululwa entolongweni ngo-1998. Uphi na ngoku?
UCharles "Lucky" uLuciano
Kukholelwa ukuba uLuciano wayengomnye wamadoda anamandla kunabo bonke olwaphulo-mthetho oluhlelekile kwaye nanamhlanje impembelelo yakhe kwimisebenzi ye-gangster e-USA isaphila.
Ngomhla kaFebruwari 17, 1970, ubugebengu obuyingozi bwenzeka ngaphandle kwe-Fort Bragg eNyakatho Carolina. Umfazi wesigqirha somkhosi kunye nabantwana babini babulawa ngokugqithiseleyo kwaye ugqirha walimala. Iinyani zolu lwaphulo-mthetho zichasene nokuvalelwa komthetho ngalunye kwaye izimvo zithathwa njenge-duel ekuphumeni kwelanga.
Kidnapper, Rapist, Mbulali
UM Matthews wathunjwa kwaye wahlaselwa ngokwesondo intombazana eneminyaka engama-21 ubudala, wayiqhayisa ukufa.
UMcCullum kunye nabahlobo bakhe bashaya, baphangiwe, bathunjwa baza batyhulwa, isitayela sokuziphatha, indoda eyintombazana abaye bafumana kuyo yokupaka. UMcCullum kamva waqhayisa ukuba wayezigweba ngenxa yokuba wayethathe ubomi bomntu.
UFrederick Patrick McWilliams
UMcWilliams kunye nabahlobo bahlasela umntu ongenamakhaya elele emotweni yakhe waza wambulala ngenxa yesizathu esicacileyo.
UPeterson wabulala umfazi wakhe okhulelwe kunye nomntwana ongakazalwa waza waphosa umzimba eSan Francisco Bay. Umfazi wakhe wasekuqaleni, u-Amber Frey, wanikela ubungqina obuncedisa ukugweba uPeterson ngokubulala.
UBrian David Mitchell
UMitchell, kunye nomkakhe uWanda Barzee, basolwa ngokuthumba u-Elizabeth Smart-14, oneminyaka eli-14 ubudala.
UMorris wahlasele indoda eneminyaka engama-70 ubudala, wayinqumla intloko yakhe, wayiqhayisa intloko ngentanda kwindlu yaseHouston yasexhoba waza wamphanga.
URobert Brice Morrow
UMorrow uthathile umfundi oneminyaka engama-21 ubudala wekholejini, umbethe, aze amnqume umqala. Wayenobungozi obu-42 ngexesha lakhe lokufa.
UCharles Chi-tat Ng
I-Kidnapper, i-Torturer, i-Rapist, i-Murder
UCharles Ng wathatha inxaxheba ekuthinjweni, ukuhlushwa kakubi, ubugqila, ukudlwengula nokubulala amaxhoba amaninzi kwelinye lamacala amaninzi kwaye axabisa ukubulala kwimbali yaseMelika.
UJoe Nixon uye wabulawa eTexas iminyaka engama-19 ngenxa yokubulawa kukaJeanne Bickner oneminyaka engama-38 ubudala, obophelele kwimithi eneetambo ze-jumper aze ahlale emlilweni.
UDennis Rader - I-BTK Strangler
UDennis Rader, umbulali we-BTK, wavuma kwizenzo zakhe zobugebengu ngezwi elingenanto yokuvakalelwa kunye nokuzisola, kodwa ngeqhinga lokuziqhenya.
URichard Ramirez - I-Night Stalker
Rapist, Torturer, Siller Killer
Umnquli kaSathana, umbulali wobulali kunye nomdlwenguli, uRichard Ramirez wabizwa ngokuba yi-Night Stalker, emva kokumangalisa eLos Angeles ngexesha lokubulala nokudlwengula iminyaka yonke. Wagwetywa ngamanqaku angama-43, kubandakanya ukubulala, ukubethelwa, ukunyusa, nokudlwengula.
UJohnny L. Robinson
URobinson wathunjwa, wadlwengulwa waza wadubula ibhinqa elineminyaka engama-31 ubudala elithe lafumana umgca emgwaqweni omkhulu.
UDonette, wabanjelwa, wadubula, waza wabulala umama osemncinci, wambamba imoto yakhe nemali kwaye wasebenzisa ulwazi malunga nokubulala ukuzama ukuphuma ngexesha lokukhonza ezinye izenzo zobugqwetha azenzileyo.
U-Ross, oqhutywe ngongcamango obundlobongela ngesondo, wadlwengulwa kwaye wabulala amantombazana amantombazana asibhozo.
URaymond Dayle Rowsey
URowsey wadulela amaxesha amathandathu kwisibhalana esineminyaka engama-20 ubudala, waza wamkhwelisa ngendoda ngokufa ngo-$ 57.54 ngemali kunye neyemagazini.
UCharles Laverne Singleton
U-Singleton wabulala wabulawa ngumnikazi wesitolo oneminyaka engama-31 ubudala, owayengomnye wabantu abambalwa ebomini bakhe obuthandana naye.
URichard Speck - Wazalelwa Ukuphakamisa Isihogo
Amagama athi "Wazalelwa Ukuphakamisa Isihogo" ayetotywe engxenyeni yendoda ende ende ejongene nokukhwabanisa ene-drawl esezantsi eyangena kwigumbi lokugcina umhlengikazi ngobusuku obufudumele ngoJulayi ngo-1966.
Amapolisa athi uChester Dewayne Turner ngowona mbulali obulalayo kwimbali yedolophu yaseLos Angeles. Ekugqibeleni wagqitywa ngokusebenzisa uvavanyo olubanzi lwe-DNA. Ngubani na amaxhoba akhe kunye nendoda eyayibanjwa ngokuphosakeleyo ngenxa yobugebengu?
UVickers uceba ukuphanga nokubulala umnikazi wevenkile wendawo yaseArthur City, eTexas.
I-Coral Eugene Watts - I-Sunday Morning Slasher
Ibali elimangalisayo lombulali wobulali uCoral Eugene Watts, owathi wavuma ukubulala abantu abangaphezu kwama-80, uye wavuma ukuba uya kuphinda abulale, kodwa iTexas ayikwazanga ukumgcina emva.
U-Weaver uthunjiwe, wadlwengula, wabulala intombi yakhe, u-Ashley Pond oneminyaka engu-12 ubudala kunye noMilanda Gaddis oneminyaka engama-13 ubudala, bafihla imizimba yabo ngasemva kwakhe.
UDonald Eugene Webb
I-Webb ifunwa ngokuphathelele ekubulaweni kwenkosi yamapolisa yasePennsylvania eyadutshulwa kabini kwinqanaba elisondeleyo emva kokubethelwa ngenkohlakalo ngentloko kwaye ibhekane nesixhobo esicacileyo.
UWilliams washaya umfazi oneminyaka engama-76 ubudala ebusweni kunye namahlombe, wamdubula emlonyeni, waqhaqhazela esifubeni sakhe, washiya intshitshi yamagazi ebhaliweyo kwisigxina sakhe sasebusuku.
U-Willingham wabulala iintsana zakhe ezintathu waza wayibeka indlu ngomlilo ukufihla ityala lakhe.
Umsebenzi washaya intombi yakhe eneminyaka emibini ubudala, u-Amber Holman, ukuba afe. Wafa ngeentlungu ezininzi entloko nasesisu.
UZimmerman wabulala ngendoda egumbini lehotele ngenjongo yokumbamba imali yakhe.
I-Peterson Verdict: Iimeko ezikhethekileyo
Iindlela ezili-8 zokwenza ukufunda okungakumbi
I-PEO International Scholarships kwaBasetyhini
UThixo ufile: i-Nietzsche kwi-Dieting Diety
Ngaba Kukhuselekile Ukunyuka? Ukuba kunjalo, Ukhuselekile njani?
I-Archaeology: Kutheni Kukho Indlela Eyodwa Yokupaka I-Archeology?
'Isandla sikaThixo' sikaGeorge Maradona
Ukuphendula kwe-Redox - Umzekelo wokulingana olinganayo
Isifundo sokuzibulala ngo-Emile Durkheim
Izigidi ezingama-20 ezithandekayo kwi-Twitter
Iyiphi i-Shelf Life ye-Radiator Coolant okanye i-Antifreeze?
Imidlalo yeOlimpiki Imbali